Rafitra filtrana mitohy, Disc Filter tsy tapaka, catalyst Thickener- Zhengyuan
Zhenyuan dia mahafeno ny fepetra ho an'ny ISO9001: 2008 Management Management System, ny ISO14001: 2015 ny Rafitra Eanagement System momba ny tontolo iainana, ary ny OHSAS18001: 2007. Zhengyuan dia mpikambana ao amin'ny komity "Komitim-pirenena ara-teknika momba ny fametavetana amin'ny fizarazarana sy fanaovana screening" (SAC / TC168) ary "Komitim-pirenena ara-teknikan'ny fitazonana fisarahana" (SAC / TC92). Ny marika famantarana azy, "ZYstar", dia lasa malaza
Ny orinasa ambony-teknolojia orinasa avo lenta.
Zhengyuan dia nanokana efitrano fanadiovana sy efitrano fiasa miaraka amin'ireo fitaovana arakaraka ny paikady ahitàna ireo fitaovana, izay mahay mifanaraka amin'ny fandrefesana ...
Ny fahatsapana ny fihenan'ny fibre vy dia afaka mifanipaka ...
Ny matotra nanota dia vita amin'ny metaly tariby bitika tsy metaly, metaly ary hafanana vita amin'ny vy vita amin'ny metaly miovaova. Ny tsiranoka vita amin'ny vy vita amin'ny metaly sosona maro dia afaka mamorona grady kely amin'ny tsipika matevina samihafa, ary afaka mifehy ny fitandremana filtration sy fandotoana tsimoka tokana. Izany dia afaka mitazona ny vokatra sivana amin'ny lamba fanivanana tsy an-kijanona, ary manana ny toetran'ny tambajotra telo-dimensional, firavaky ny voron-trano, porosy avo, surfac lehibe ...
Multilayer vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita ...
Multilayer metra sintered mesh dia karazana sivana vaovao misy fitaovana fanamafisana sy tanjaka amin'ny ankapobeny. Vita vita amin'ny metaly multilayer vita ary vita avy amin'ny lamination tsindry sy manota vakoka. Ny mesh dia mihodina manangana rafitra fanamiana sy fanamainty. Tsy vitan'ny hoe maharesy ny tsy fahampian'ny tanjaka ambany, ny fikorontanana malemy ary ny endriny tsy azo antoka ny elanelan'ny tariby iraisana, fa afaka mitentina koa ary ...